Iindaba zesintu ngomhla we 20 Eyenkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Written by Ashia Nkontsa on 20/11/2018
Sikhatyiwe isicelo sika Hlaudi Motsoeneng kwinkundla yezibheno yoMgaqo siseko
Owayesakuba yintloko yemisebenzi e-SABC umnumzana Hlaudi Motsoeneng uthi uyasihlonipha isigqibo senkundla yomgaqo-siseko ngakuye kwaye uzakuhambisana naso. Izolo inkundla isikhuphe ngefesitile isicelo sesibheno kwinkundla yezemisebenzi sokuba ahlawule indleko zenkundla ngokwayamene nokuphelisa kwakhe ukupapashwa kwezenzo zoqhankqalazo ngomnyaka ka2016. Iintatheli ezisibhozo ze-SABC zimelwe ziimanyano zabasebenzi i-Solidarity neBemawu zaphumelela eli tyala enkundleni yaza inkundla yagweba ngelithi lokaMotsoeneng makahlawule iindleko. Umnene lo uye wafaka isibheno kwinkundla yezibheno yemisebenzi nakwinkundla ephakamileyo yezibheno koko wawa nganeno kwisicelo sakhe.
uMnumzana Louis du Preez ubekwe kwi Nkapani yakwa Steinhoof njengomlawuli wayo oyintloko
Inkampani esoloko isematheni yakwaSteinhoff ityumbe umlawuli wayo wezorhwebo umnumzana Lous du Preez njengegosa eliyintloko elisisigxina. uDu Preez ebesoloko engumntu ophambili kwiinzame zale nkampani zokubuyisela imeko yezimali kuzinzo. Le nqeberhu, ingena ezihlangwini zikaDanie van der Merwe ozakwehla kwesi sikhundla ekupheleni kwenyanga ezayo. Oku kuza emva kokuvela kwamabango olawulo gwenxa olubangele isikroba seentywenka yemali kule nkampani. Obesakuba yingqonyela yakwaSteinhoff umnumzana Markus Jooste obeke phantsi iintambo emva kokuvela kwezi ngxelo uyaphandwa sithethanje.
Oka Craig Lambinon uthwalisiwe ngokwemisebenzi yakhe yeminyaka
Usomlomo wecandelo lezohlangulo elwandle umnumzana Craig Lambinon ufumene iwonga kwindlu yozakuzo yelizwe laseFrance ngenkonzo yakhe kwicandelo laselwandle. Umnene lo uchazwe njengeqhawe ngegalelo lakhe kwiNSRI ukususela ngomyaka ka1993 kwaye ungowokuqaola kwilizwe loMzantsi Afrika ukufumana eli wonga. OkaLambinon uthi uchulumancile leli wonga kwaye ngokomsebenzi awenzayo abajonganga nzuzo koko bawenza ngenxa yokuwuthanda ngoko kuyinto enkulu kuye ukuqatshelwa kwegalelo lakhe.
uZizi Kodwa weANC, uphendule kwizigxeko ezenziwe yiEFF ngakumphathiswa uGordhan
Itloko kwiOfisi kamongameli kwi-ANC umnumzana Zizi Kodwa uthi izigxeko ze-EFF kakumnumzana Pravin Gordhan ziipolitiki nje zokuphazamisa nokususa amehlo kwinto ebekufanele kujongwa kuyo. I-EFF ibibambe umngcelele ngaphandle kwesakhiwo ekubanjwe kuso ikomishoni kaZondo eParktown eRhawutini ngethuba lokaGordhan eseqongeni. Okwakalokunje uGordhan uxelele le komishoni ukuba wabuyiselwa kwisikhundla sokuba ngumphathiswa wezimali emva kwesaqhwithi esenzeka kwicandelo leemarike zezimali kulandela ukugxothwa kukamnumzana Nhlanhla Nene. I-EFF ityhola uGordhan ngokuxoka phantsi kwesifungo malunga nokudibana kwakhe nosapho lakwaGupta kwaye imemelela ukuba aguzulwe esihlalweni.
iNkokheli yeDA kwiphondo leNtshona Koloni liphefumle kwisibhengezo sika De lille lokuqala iqela lezepolitiki
Inkokheli yeqela leDA kwiphondo leNtshona Koloni umnumzana Bonginkosi Madikizela uvumile ukuba kuninzi ekufuneka kwenziwe liqela lakhe ukuphucula ubudlelane phakathi kweli qela nabavoti nanjengoko kusingiswe kulonyulo jikelele lonyaka ozayo. Uthi ngoku ucinga ukuba lilixa elifanelekileyo lokuhoyana nabavoti nanjengoko ingabo ababalulekileyo. Ukanti akukacaci ngokupheleleyo ukuba iqela elitsha lezopolitiko lobesakuba ngusodolophu wesixeko seKapa unkosikazi Patricia de Lille lizakuba namandla angakanani na kulonyulo, ingakumbi kwisixeko seKapa apho i-DA ilawula khona. Sele izinyanga eziliqela u-De Lille ejijisana neDA kumadabi asenkunldeni nasesidlangalaleni kwaye ngoku ude wakhululeka ngokubeka phantsi iintambo kweli qela nalapho ke ngeCawe athe wavakalisa ukuba useka iqela elitsha lezopolitiko.
Iinkonzo ebantwini kwisixeko saseKapa
Isixeko sekapa sivakalise ukuzimisela ukuzisa iinkonzo eluntwini ekuquka kuzo amanzi. Oku kudizwe lilungu lekomiti kasodolophu kwicandelo leendawo zoogob’ityholo namanzi unkosazana Xanthea Linberg izolo ngethuba kuqatshelwa usuku lwezindlu zangasese kwihlabathi. Uthi nangonanje umyinge wamashumi alithoba anesine ekhulwini unazo iinkonzo zogutyulo lwelindle, kusekuninzi ekufuneka kwenziwa ukujongana nokonyuka kwamanani abahlali. Uthi abalulekile amaqhinga buchule amatsha ezobuchwephesha khon’ukuze kujongwane nengxaki yamanzi.
I-Arhente yezokhenketho kwelentshona koloni iphehlelele iphulo lezokhenketho.
I-Arhente yotyalo-mali kwiphondo lentshona koloni i-Wesgro iphehlelele iphulo layo lezokhenketho ngelizama ukubuyisa isidima seli phondo njengendawo yotyelelo kulandela imbalela emandla. I-Wesgro ithi akukho ndawo yotyelelo ingcono kuneliphondo kwaye kwindibano yayo bekukho namagosa aphuma kwiihotele, ezophapho kwakunye naseburhulumenteni. Eli phulo linyathelo lokujongana ngqo nefuthe lembalela kwezokhenketho kweli leKapa kwaye lixhaswa ngezimali ngamashishini abucala kwakunye namanqanaba omathathu karhulumente. Iqhinga buchule liquka ukusetyenziswa kwamaqonga ezonxibelelwano, amaziko eendaba kwakunye nobudlelane bezoshishino njengeendawo zokukhuthaza utyelelo.
uPravin Gordhan uvelise ulwazi malunga nolawulo gwenxa lukaMnomzana Zuma
Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan ulumkise ngelithi inkqubo yophando ekubanjweni ngobhongwana kwelizwe loMzantsi Afrika isesichengeni sokukhutshwa endleleni ngabo bazityebise gwenxa. Umphathiswa ukuthethe oku ngethuba enikezela ngobungqina kwikomishoni kaZondo phof’ethetha malunga norhwaphilizo olwenzeke ngelixa likamongameli Jacob Zuma phof’ebuzwa malunga nezigqibo ezilaqazisayo ezifana nokuchongwa kukamkomishinala weSARS ekubonakala ngathi zaphenjelelwa nguNxamalala. UGordhan uthe waphenjelelwa nguMsholozi ukuba achonge mntu uthile khon’ukuze athi ngcu kwesi sihlalo.